Ndekọ Ngwaahịa Mobile App | Martech Zone
Nkọwapụta Applọ Ahịa Mobile
Sunday, Jenụwarị 20, 2019 Sunday, Jenụwarị 20, 2019 Douglas Karr
Mmepe ngwa ngwa ngwa na akụrụngwa onye ọrụ na-aga n'ihu na-agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ. Ebumnuche nke ngwa mkpanaka na-emepe ụzọ maka ụlọ ọrụ ịbawanye njikọ ndị ọrụ na ahụmịhe karịrị ihe nchọgharị weebụ na-enweghị imebi akụ. Ndị ọrụ ekwentị na-atụ anya ahụmịhe ngwa dị elu ma, mgbe ha mere, ha na ndị ọkachamara na-emeri nke ọma.
Onu ogugu ndi oru eji eme ihe site na 18 rue 24 na etinye oge 121 kwa ọnwa site na iji ngwa mkpanaka na mbadamba.
Egwuregwu na-aga n'ihu na-eduga ụdị ndị ọzọ na nbudata, yana 24.8% nke ngwa niile bụ egwuregwu. Ngwa azụmahịa bụ nke abụọ dị anya, n'agbanyeghị, yana 9.7% nke nbudata niile. Na, agụmakwụkwọ bụ ụdị nke atọ kachasị ewu ewu na 8.5% nke nbudata niile.
Agbakwunyere na ọnụ ọgụgụ ụlọ ahịa ngwa ahịa:
Amazon na-eduga ngwa niile nke ngwa ngwa na ọtụtụ puku afọ, yana 35% na-eji ngwa ahụ.
Ndị ọrụ Smartphone na-eji nkezi nke Ngwa mkpanaka 9 kwa ụbọchị.
Enwere Ngwa nde ekwentị 7 dị n'etiti Google Play, Apple's App Store, na ụlọ ọrụ ngwa ahịa ndị ọzọ.
E nwere ihe dị ka 500,000 ngwa nkwusa na'slọ Ahịa Apple na ihe fọrọ nke nta ka 1,000,000 na Playlọ Ahịa Google.
Ihe ndi a n’enye ndi ahia ohere. Egwuregwu nwere ike inye ndị na-ege ntị nke ukwuu iji kpọsaa ma wulite mmata. Ngwa azụmahịa nwere ike ime ka ndị ahịa gị nwee njikọ na uru. Ngwa ngwa mmụta nwere ike iwulite ntụkwasị obi ma tụkwasị obi na atụmanya gị.
Ihe omuma a site na Ngwọta ERS IT, App Stores in Numbers: A Market Overview, na-enye ụfọdụ isi ọnụ ọgụgụ na uto, ịba uru, na ojiji nke ngwa ọdịnala na usoro ha dị iche iche - App Store maka Apple, Google Play maka gam akporo, na Ngwaahịa maka Amazon.
Nchịkọta ụgwọ maka mbido eCommerce: Ntuziaka Nkọwa
Etu esi etinye Banners App na Mobile Gị